Mustaqbal oo u dabaal-degtay sanad-guuradii 4aad | HimiloNetwork
Mustaqbal oo u dabaal-degtay sanad-guuradii 4aad
Posted by: Zakariya in Wararka March 18, 2016	0 437 Views
Muqdisho (Himilonews) – Xaflad si heer sare ah loo soo qaban-qaabiyey oo lagu maamuusayey sanad-guurada 4aad ee idaacadda Mustaqbal ayaa ka dhacday magaalo-madaxda dalka ee Muqdisho—halkaas oo qeybaha kala duwan ee bulshada, madax ka socota dowladda dhexe, ururrada bulshada rayidka iyo bahda war-fidiyeenka ay ka qeyb-galeen.
Fanaaniinta hobollada Deegaan ayaa madasha ka qaaday heeso wadani iyo guubaabo nabadeed isugu jira.
Guddoomiyaha shirkadda war-baahinta Mustaqbal radio mudane Ahmed Ciise Guutaale oo madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday waqtigii adkaa ee idaacaddu ay kusoo dhabar-adeygtay ku shaqeyntiisa—xilli qaar kamid ah shaqaalaha oo halgan ugu jiray soo tebinta warbixino dhaxal-gal ah naftooda u waayay.
Guutaale ayaa laga dheehan karay tiiraanyo markii uu dib u xusay magacyada qaar kamid ah asxaabtii ka tirsaneyd bahda Mustaqbal ee geeriyooday.
“Waan ka xumanahay kuwii naftoodii u waayey ka shaqeynta mihnadda saxaafadda gaar ahaan asxaabtii halkan nagala shaqeyn jirtay sida Yuusuf keynaan,” ayuu yiri Guutaale oo si adag u qiray in doorkooda lagu hubsaday geeddi-socodka howl-gal ee ku aadan himilada idaacadda Mustaqbal.
Maamulka gobolka Banadir ayaa bogaadiyay howsha qiima leh ee ay idaacadda Mustaqbal u heyso mujtamaca Soomaaliyeed.
Af-hayeenka gobolka Banadir Abdifatah Omar Halane oo mar kamid ahaa agaasimayaashii soo maray idaacadda Mustaqbal radio ayaa hambalyo diiran ka diray madasha xafladda.
“Is-baddalka shalay markii aan joogay iyo maanta u dhaxeeyaa aad bay u kala dheer tahay. Runtii waxaan qirayaa inaad horay u tallaabsaneysaan. Magaciinuna uu noqon doono is-badalka aad u taagan tihiin mustaqbalka,” ayuu yiri Xalane oo intaas kusii daray inuu soo joogay Mustaqbal oo aan laga tebin hadallo iyo weero nac iyo fogeyn ku dhisan—ilaa maantana ay tabteedii ku taagan tahay.
Sidoo kale, madax ka socta labada gole ee dowladda oo isugu jira wasiiro iyo xil-dhibaanno ayaa kamid ahaa marti-sharaftii kasoo qeyb-gashay xafladda sanad-guurada 4aad ee idaacadda Mustaqbal.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo kasoo qeyb-galay xafladda ayaa dhankiisa ka muujiyay sida loogu baahan yahay helidda warbaahinta wax dhista sida idaacadda Mustaqbal.
“Waan idin hambalyeynayaa. Waxaana Alle idin kaga baryayaa inaad dhul nabad leh oo aan cabsi ka jirin ku shaqeysaan mustaqbalka,” ayuu yiri Maareeye isaga oo dib uga fal-celinayay khudbadii guddoomiyaha oo ay kamid aheyd inay si nabad leh ugu soo shaqeeyeen sanadkii tagay.
Bahda warbaahinta qaar oo kasoo qeyb-galay xafladda ayaa bogaadiyay howsha idaacadda Mustaqbal.
Agaasimaha idaacadda Star FM Isma’il Shiikh Khalifa oo kamid ahaa xubnihii saxaafadeed ee lagu casuumay xafladda ayaa ku tilmaamay idaacadda Mustaqbal tusaale nool oo mudan in bahda kale ku deydaan.
“Barnaamijka Kobciye, tusaale ahaan, ayaa marqaati ka ah sida idaacadda Mustaqbal ay uga go’an tahay kobcinta horumar iyo helidda nabad lagu tanaado,” ayuu yiri Khalifa oo intaas kusii daray in Mustaqbal iyo Star FM ay ku mideysan yihiin inay iska kaashadaan wax ka badalka bulshada Soomaaliyeed.
Marwada Madaxweynaha Soomaaliya marwo Zahra Cumar Xassan, oo ugu danbeyn lasiisay in weeraha ugu danbeeya ay kusoo af-jarto madasha xafladda, ayaa sidoo kale ku biiriday hambalyada iyo bogaadinta loo diray bahda shirkadda warbaahinta Mustaqbal.
Iyada oo ka hadlaysay xafladda, Marwo Zahra ayaa aad ugu amaantay madaxda iyo shaqaalaha idaacadda Mustaqbal sida hufan ee ay ugu dhabar-adeygaan soo saarista warar iyo barnaamijyo tayaysan.
“Burburkii dalka ku dhacay wuxuu wada aafeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Warbaahintuna waa door kamid ah kuwa ugu muhiimsan ee lagu hubsan karo dib-u-dhisidda. Waan bogaadinaya howsha quruxda badan ee aad bulshada u qabataan,” ayay tiri Marwo Zahra, afada koobaad ee dalka—ahna marantida madaxweyne Xassan Sheikh Mohamud.
Gabagabadii xafladda, waxaa shahaado sharafyo la guddoonsiiyay marti-sharaf joogtay joogtay madasha oo ay kamid aheyd Marwada madaxweynaha, weriyayaal, shirkadaha qaar ee dalka kajira ee muujiya howlkarnimo iyo hufnaan iyo qeybaha kale ee isugu jira ururrada bulshada rayidka iyo xubno dowladda dhexe kamid ah.
Idaacadda Mustaqbal ayaa la aas’aasay bishii March 15-keedii sanadkii 2012. Waxaana afar sano oo ay ku jirtay hawada kasbatay dhageystayaal badan oo dalka iyo dibaddiisa ku kala nool.
Previous: Maxayna Dhexyaal: Hurgumo mise Hunguri?– Maxammuud C. Geeldoon
Next: Sahan cilmiyeed: Maxaa keena Yaraanshaha Biyaha Labbada Webi ee Jubba iyo Shabelle?!